प्रचण्ड १० बर्षमा साढे नाै बर्ष भारतीयहरूकाे पाेल्टा र काखमा सुरक्षित बसेर ‘क्रान्तिकारी’ कहलिए « Post Khabar
प्रकाशित मिति: २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:३२
साइनिङ पाथले संचालन गरेकाे सशस्त्र जनयुद्धको क्रममा पक्राउ परी २९ बर्षदेखि जेलमा रहेका अब्युम्याल गुजम्यान (का. गाेञ्जालाे)काे ८६ बर्षकाे उमेरमा छालाकाे क्यान्सरकाे उपचारको सिलसिलामा सैनिक अस्पतालमा २०७८ भदाै २५ गते मृत्यु भएको खबर छ।
आफ्नाे आस्था र विचारका खातिर संझाैताहीन संघर्षकाे नेतृत्व गरेका कामरेड गाेञ्जालाेकाे यस दुखद अवसानकाे क्षणमा उनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु,भलै म कहिल्यै पेरूकाे सशस्त्र संघर्षको समर्थक थिइन र हाेइन।जबकि नेपालमा कुनै समय ‘ओ याङकी गाे हाेम, डर्टी याङ्की गाे हाेम, हाम्रो राताे झण्डा पेरूमा फरफराइरहेकाे छ’ भन्ने गीत गुन्जाइन्थ्याे।
‘का. गाेञ्जालाेका अन्तर्वार्ताहरू’ नामक नेपालीमा अनुदित पुस्तक मैले धेरैपटक पढेकाे छु र मेराे निजी लाइब्रेरीमा कतै सुरक्षित पनि हाेला!
साइनिङ पाथकाे हुबहु नक्कल गरी नेपालमा ‘सशस्त्र जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका प्रचण्ड १० बर्षमा साढे नाै बर्ष भारतीयहरूकाे पाेल्टा र काखमा सुरक्षित बसेर ‘क्रान्तिकारी’ कहलिए। खारा सैनिक पाेष्टमाथिकाे आफ्नै नेतृत्वको एकमात्र हमला असफल भएपछि रंग फेरेर विगत १४ बर्षयता उनले कुनै रूप बदल्न र कस्तै रंगकाे पनि बन्न बाँकी राखेनन् र आज खुमल्टारमा बिराजमान छन्। अनि, उनकाे भेटघाट कक्षमा गान्धी र बुद्धका मूर्ति सजाएर दुई दिन अघि मात्र एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा साेमारलाई भेटेकाे तस्बिर उनकाे सचिवालयले सार्वजनिक गरेकाे छ! त्यहाँ माओे र गाेन्जालाेकाे स्थान गान्धी र बुद्धप्रतिकाे देखावटी भक्तिभावमा बदलिएको छ। अर्थात्, पुष्गकमल दाहाल अब माेहनदास करमचन्द गान्धी र सिद्धार्थ गाैतमकाअनुयायी अंगुलीमाला पाे बन्न पुगेका छन्, भलै उनकाे पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र(?) नै रहेकाे छ !
नेपालमा उहिले २०३३/३४ सालतिर हरेराम शर्माले ‘बाेधिसत्व माओवाद’काे सूत्रीकरण गरेका थिए, पुष्पकमल कम्तिमा उनी जति पनि इमान्दार कायम रहन सकेकाे देखिएन। आज उनी खासमा अस्थिरताका तुरूपबाहेक अरू केही नरहेको स्पष्ट भएको छ । अझ राेचक विडम्बना, २०५२ सालमा जसलाई ४०सूत्रीय माग डा. बाुराम भट्टराईमार्फत प्रस्तुत गरी १७ हजार नागरिकको ज्यान लिने ‘मृत्युपर्व’ शुरू गरेका थिए, आज उनै शेबदेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर दुई थान मन्त्री बनाई सत्ताकाे स्वाद फेर्न दंगदास छन्। सायद यस्तै स्थितिलाई राजनीतिक पदावलीमा अधाेपतन भनिन्छ !
विचार सही वा गलत हुनसक्छ, तर सही ठम्याएकाे र अवलम्बन गरेकाे विचारप्रतिकाे गाेञ्जालाेकाे निष्ठा र अडानलाई मान्नैपर्छ। उनी ‘करियरिष्ट’ थिएनन् र त दिउँसो र राति भिन्नाभिन्नै रंग बदल्ने छेपाराेजस्ताे पुष्पकमल दाहाल बनेनन्।
तिम्राे विश्वभरि संझना भइरहने छ!